Indlu emhlophe kufutshane neTimanfaya Park - I-Airbnb
Indlu emhlophe kufutshane neTimanfaya Park
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguIsabel
Istudiyo esiyi-50 sisebenzisa nomhlaba wendlu yethu kodwa sizimele ngokupheleleyo ngendawo yokungena kunye negadi yabucala, ukuze iindwendwe zizonwabele ngokukhethekileyo. Ilungele abantu ababini abanezinto zonke abazidingayo.
Indawo evulekileyo, enegumbi lokulala elinye, igumbi lokuhlambela/ikhitshi elijonge egadini, ebalaselisa iifestile ezinkulu ezikuvumela ukuba wandise indawo ngaphandle.
Ikhitshi lale mihla, elinento yonke.
Igumbi lokuhlambela lineshawa, iitawuli zokuhlamba kunye neetawuli zaselwandle.
Le ndawo ivulekile, kulula, apho iindonga ezimhlophe, amatye namaplanga zenza ubuhle.
Indawo ekuyo kunye noxolo lwengqondo lunceda ekwenzeni kubekho uxolo lwengqondo endiqinisekile ukuba baza kuyivuyela.
Unokonwabela ukufunda ilayibrari yethu encinci okanye wonwabe ngemidlalo yebhodi olahlwayo kuyo ngoxa wonwabele ukukhanya kwemvelo okungena kwiminyango emikhulu yeglasi.
Eli khaya lineTV yee-intshi eziyi-40 enamajelo kazwelonke nawamanye amazwe, kunye neNetflix neWi-Fi yasimahla. Ukuze uzonwabise, sineendawo zokudlala eziyi-4 kwaye ungazisa imidlalo oyithandayo ukuba uyafuna.
Indawo yegumbi lokulala epholileyo yenzelwe ukuphumla kwaye le njongo inomatrasi otofotofo kunye nezinto zokondlula ibhedi.
Igumbi lokuhlambela liyasebenza; Ineshawa enkulu enetephu enengxangxasi, intle kakhulu. Sinikezela ngezinto zokuthambisa, njenge-shampoo, i-gel ne-conditioner, i-hairdryer kunye ne-ayini yeenwele.
Ikhitshi lelale mihla , linazo zonke izixhobo zombane ezincinci, ngoko unokuphinda uthenge izitya zakho eziphambili.
Le ndlu isemaphandleni yenzelwe ukonwabela, inefenitshala yangaphandle kunye
ityeya ijongene nomzantsi, ithintelwe yimithi yeziqhamo, apho unokuphumla khona kwigadi yakho encinci yabucala uze ugqibezele ukuba nendawo yokoja emnandi.
Indawo yokuhlala ikufutshane nentaba-mlilo yaseGuiguán, kwidolophu encinci yaseMancha Blanca, igama layo libhekisa kumabala amhlophe anokubonwa eMontaña de Caldera Blanca, enye intaba-mlilo kufutshane nelali. Ukuba uyathanda ukunyuka intaba, ukutyelela kwabo yenye yezona ndawo zintle endinokuzicebisa.
Yonke le ndawo ikumema ukuba ubuke iintaba-mlilo zayo.
NgeeCawa sinemarike kwisikwere sedolophu, kunye neemveliso zasekuhlaleni apho ungathenga khona iwayini eyenziwe ekhaya kunye netshizi, kunye neemveliso zasekuhlaleni.
Kulo masipala sineevenkile zokutyela ezahlukahlukeneyo apho unokuva ukutya kwaseCanarian nokutya kwamazwe ngamazwe.
Malunga ne-600m ukusuka endlwini kukho ivenkile enkulu kunye neebhari kunye neevenkile zokutyela.
Sisekufutshane neTimanfaya National Park, indawo ekhuselekileyo endicebisa ukuba uyifumane.
Ngaphambi kokuba uqale, ungasazi indawo ephakathi yeendwendwe ezikwilali, engabhatalelwayo ibe ngenkqubo yokungayiva uza kubona umbono opheleleyo wePaki Yelizwe.
Ikwakho Neentaba Zomlilo , elinye lamaziko ethu abalulekileyo abakhenkethi.
Ukwabelana ngomasipala okwiikhilomitha eziyi-8 ukusuka kwidolophana yaseLa Santa, edume ngamaza ayo, apho ndiqinisekile ukuba abathandi bemidlalo yamanzi baza konwabela.
I-Famara Beach ikumgama weemayile eziyi-12,ikwayindawo entle yokusefa.
Lulwandle olwandisiweyo olunesanti yegolide, ekwindawo esezantsi kweRisco de Famara, iliwa elineendonga ezimangalisayo ezimi nkqo.
Ndicebisa ukuba ubukele ukutshona kwelanga kolu lwandle.
SiseNtshona yesiqithi, ukusuka apha sinokufikelela kuso sonke isiqithi kwimizuzu emalunga ne-40, ukuya kwicala elikude, yonke into ikufutshane.
Eyona nto iphambili kuthi kukuba ukonwabele ukuhlala kwakho kwaye siza kwenza konke okusemandleni ethu ukuze senze njalo.
Hlala uhlonipha izinto zakho eziyimfihlo , siza kufumaneka kuyo nantoni na osenokuyidinga.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mancha Blanca